Kolonyo Mareykan iyo AMISOM ah oo Lagu Qarxiyay Sh/ Hoose
Sunday April 15, 2018 - 16:52:23 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Wararka ka imaanaya Degmadda Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku waramaya in halkaas uu maaanta ka dhacay qarax miino oo dhulka lagu aasay.
Qaraxaan ayaa lala eegtay Kolonyo Mareykan iyo AMISOM ah oo marayay Degmadda Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Qaraxan waxaa dhawaaqiisa si aad ah looga maqlay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelada hoose,waxaana la sheegay in uu burburiyay gaari kamid ah gaadiidkii ay wateen kolanyada mareykan-ka iyo AMISOM.
Kolanyada isugu jirta American-ka iyo Amisom ee qaraxa lala beegsaday ayaa kasoo baxay dhanka degmada Buula mareer ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Ilaa haatan si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxaan ka dhacay Degmadda Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose,waxaana sheegtay Al-shabaab.